Barattoonni naannoo Oromiyaatti qormaata biyyoolessaa xumuran hojii tola ooltummaa Gannaa arjooman eegalaniiru – Fana Broadcasting Corporate
Barattoonni naannoo Oromiyaatti qormaata biyyoolessaa xumuran hojii tola ooltummaa Gannaa arjooman eegalaniiru
Finfinnee, Waxabajjii 11,2011(FBC)- Barattoonni naannoo Oromiyaatti qormaata biyyoolessaa xumuran hojii tola ooltummaa Gannaa arjooman eegalaniiru.
Barattoonni naannoo Oromiyaa torbee darbe qormaata kutaa 10ffaa xumuran biqiltuu dhaabuu fi uffannaa mana barnootaa barattoota harka qalleeyyii ta’aniif arjoomuun, hojii hirmaannaa tola ooltummaa mootummaan waamicha irratti dhiyeesserratti hirmaachuu eegalaniiru.
Guyyaa har’aa Oromiyaatti barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa xumuran 85,989.
Hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon akka ibsanitti, barattoonni akkuma qormaataa ba’aniin biqiltuu dhaabuu fi uffannaa mana barnootaa arjoomuun tola oolaniiru.
Barattoonni qormaata xumuran biqiltuu dhaabuu, uffannaa arjoomuu, naannoo qulqulleessuu isaaniis eeraniiru.
Obbo Admaasun hojiin arjoomaa fi tola ooltummaa kun Ganna yeroo boqonnaa barattootaatti hojiilee addaddaatin cimee akka itti fufu imaanaa jedhaniiru.
Tibba Gannaa keessas maanguddootaf mana haaromsuu, daandii adda cite suphuu, hojii qonnaatin deeggarsa taasisuu, magaalaa qulqulleessuu, barattoota qo’achiisuu fi hojiilee tola oolmaa addaddaarratti kan bobba’amu ta’uu hoggantichi ibsaniiru.
Bara kana barattoonni miiliyoonni 1.6 sadarkaa biyyaatti qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa fi 12ffaaf galmaa’aniit turan.
Kana keessaa kutaa 10ffaaf 1,277,533, kutaa 12ffaaf ammoo barattoonni 322,317 galmaa’aniit turan.
Oromiyaatti ammoo barattoonni miiliyoonni 1 ol qormaata kutaa 8ffaa,10ffaa fi 12ffaa fudhachuuf galmaa’aniit turan.
Dr Ergoogeen Ityoophiyaatti Ambaasaaddara Saawdii waliin mari’atan